Ajay Devgn filimka Total Dhamaal ma uusan isaga bixin haatana hogaamiyaha mashruucaan ayaa laga dhigay | Filimside.net
Home » Wararka Maanta » Ajay Devgn filimka Total Dhamaal ma uusan isaga bixin haatana hogaamiyaha mashruucaan ayaa laga dhigay
Ajay Devgn filimka Total Dhamaal ma uusan isaga bixin haatana hogaamiyaha mashruucaan ayaa laga dhigay
Superstar Ajay Devgn taxanaha Dhamaal inuu saxiixday ayaan hada ka hor idinla wadaagnay oo uu door muhiim ah ku leeyahay sidoo kalena 30-maalmood duubistiisa ka qayb qaadan doono asigoo lagu siin doono 35 Crore.
Balse waxaa xigtay in la sheegay Devgn filimka Total Dhamaal uu isaga baxay madaama xiligii lagu balamay duubistiisa la bilaabi waayay wuxuuna waqtigiisa galiyay filimada Baadshaho iyo Golmaal Again oo sanadkaan la daawaday.
Haatan warbixin cusub oo Bollywood Hungama kasoo xigatay Director Indra Kumar ayaa lagu xaqiijiyay in Ajay qayb ka yahay Total Dhamaal dhawaana uu duubis ku bilaabi doono.
Sidoo kale waxaa la xaqiijiyay in Ajay doorkiisa laga dhigay mid hogaamiye ah sidoo kalena 45-maalmood duubis ah filimkaan galin doono halka uu markii hore 30-maalmood door caawiye ah ku sameyn lahaa sidoo kalena lacagtiisa 40 Crore ilaa 45 Crore ayuu sameynta Total Dhamaal ku qaadan doonaa.
Taxanahaan labadiisii qeyboodd Dhamaal iyo Double Dhamaal waxaa hogaamiyaal ka ahaayeen Arshad Warsi, Ashish Choudhary iyo Riteish Deshmukh halka Sanjay Dutt uu door caawiye ah ku lahaa ama door muhiim ah.
Booskii Sanjay Dutt waxaa lagu badalay Anil Kapoor halka Total Dhamaal Ajay Devgn ay la hogaamin doonaan Arshad iyo Retiesh waxaana duubistiisa la bilaabi doonaa 15-ka bisha December ee nagu soo fool leh gobolka Uttar Pradesh (UP) ee waqooyiga Hindiya ku yaalo ayay duubista ka bilaaban doontaa waxaana la qorsheeyay xagaaga dambe 2018 in la daawado.
4 Responses to Ajay Devgn filimka Total Dhamaal ma uusan isaga bixin haatana hogaamiyaha mashruucaan ayaa laga dhigay
maduri dixit ayaa la sheegay in door laga siigay oo uu indra kumar ku soo daray arintaas maxaa ka jira
Wey iska diiday sameynta filimkaan
nuur cade ibrahim
filmkan qaybihiisii hore ma kuwa guulaystay baa sxb sakiriye
Haa waa kuwo guleesteen oo weliba aad look jecel yahay dhanka TV yada ka hirgaleen